Tonga any amin'ny toeram-pambolanao ao amin'ny Hay Day ny tantely ho an'ny Android | Androidsis
Tonga any amin'ny toeram-pambolanao ny tantely amin'ny fanavaozana ny Hay Day vaovao
Toy ny fanavaozana vaovao rehetra tonga amin'ny Hay Day, tonga matetika miaraka amin'ny vaovao be dia be izay mampitombo ny fahafinaretana sy ny habetsaky ny atiny ananan'ity simulator fambolena ity izay no tsara indrindra hita ao amin'ny Play Store mandritra ny fotoana fialamboly mahafinaritra.
Ny kinova vaovao an'ny Tonga tany omaly i Hay Day ary nitondra zavamananaina vaovao niaraka taminy iza no hiandraikitra ny "fandotoana" ny voninkazo ao amin'ny toeram-pambolenao ary tsy iza fa ny tantely. Amin'ity fanavaozana vaovao ity dia azonao atao ny manana tantely 12 manangona vovobony amin'ny ala vitsivitsy izay tsy maintsy ambolenao ao amin'ny toeram-piompianao ary avy eo avadiho ho lasa nectar izay tsy maintsy angonina sy ampiasaina ao amin'ny mpitrandraka tantely.
Ankoatr'ity vaovao mahafinaritra ity dia tongava ity fanavaozana vaovao ity fanatsarana hafa izay azonao jerena etsy ambany amin'ny lisitra iray manontolo amin'ny famerenanana ny Andro Hay
1 Ny tantely dia misidina manodidina ny tanimbolinao
2 Inona no vaovao amin'ny fanavaozana ny Hay Day
3 Inona no atao hoe Hay Day?
Ny tantely dia misidina manodidina ny tanimbolinao
Manomboka anio dia hanana ireto ianao biby mahafinaritra manenika ny kirihitra fa hamafy any amin'ny toeram-pambolenao ianao mba hahazoan'izy ireo ny vovobony ilaina hamadihana azy ireo ho lasa nectar, izay tsy maintsy angoninao amin'ny tanana ary avy eo dia alaminoo ao amin'ny mpitrandraka tantely hamokarana ilay vokatra sarobidy.
Ny zavatra voalohany tokony hatao emplazar dia afoary izay hipetrahana tantely 3 manana farafahakeliny 4 amin'ny fitambarany miaraka amina tantely 12
Se hamboly ny kirihitra avy aiza no hanangonany ny vovobony ary avy eo dia entin'izy ireo any amin'ny tranobeny mba hamokarana ny mamimbony
Ankehitriny ianao dia tsy maintsy miandry kely ho azy ireo mamokatra an'io nectar io azonao atao ny manangona avy amin'ny takelaka misy azy
Amin'ny nectar efa nangonina, ianao irery avela hamorona tantely ao amin'ny mpitrandraka tantely azonao apetraka amin'ny vidiny volamena 35000
Mety misy a vokatra isan-karazany tsara miharo tantely toy ny popcorn tantely, toast tantely na pie pika misy tantely ankoatry ny hafa
Inona no vaovao amin'ny fanavaozana ny Hay Day
Ankoatr'izay misy azy ao anaty izay zavatra rehetra entin'ny tantely miaraka amin'ny mpitrandraka tantely, ny apiary ary ny ala izay angonin'izy ireo vovobony, Hay Day dia mitondra zava-baovao noho ny iray hafa. amin'ny maha olom-pirenena vaovao ho an'ny vahoaka tahaka ny mpilalao sarimihetsika.
Ao amin'ny tanànanao dia azonao atao izao amboary ny fivarotana fanomezana.
Mpitsidika vaovao hafa no hiseho ao amin'ny tanànanao: mpilalao sarimihetsika manan-talenta
Mamoha haingon-trano vaovao telo ho an'ny tanànanao: fihinanam-bilona vaovao roa ho an'ny morontsiraka sy lapa kely fasika
Miaraka amin'ity fanavaozana vaovao ity tapitra ny lohahevitra fahavaratra
Nihatsara ny fifandanjana ao an-tanàna
maro fanamboarana an'ny bibikely
SuperCell dia namoaka tutorial video amin'ny fomba fiasan'ny tantely, takelaka, kirihitra ary fitrandrahana tantely, mba tsy hahadino anao ny antsipirian'ny zava-baovao ity. Ao amin'ny lohateny dia azonao atao ny mamerina azy.
Inona no atao hoe Hay Day?
Hay Day dia iray amin'ireo simulator fambolena tsara indrindra izay misy androany ao amin'ny Play Store. Hametraka anao amin'ny fifehezana ireo singa rehetra mandrafitra ny fambolena misy atiny lehibe izay haharitra ora sy ora maro hankafizanao izay rehetra atolotry ny Hay Day.
Tany hiompiana, ny karazana biby toa izao kisoa, omby, osy, akoho na soavaly hikarakara sy hahazo ny vokatra mpanao asa tanana tsara indrindra azonao amidy ao an-tanàna amin'izay hahafahan'ny mpitsidika mamela ny volany ary amin'izany dia afaka mitombo ianao ho toy ny toeram-pambolena. Azonao atao ny mandefa entana amin'ny alàlan'ny ranomasina ary manana toeram-pambolena trondro mihitsy aza mba hanangonana lobsters na koa hahazoana trondro isan-karazany.
Un simulator izay tsy azo adino amin'ny Android anao miaraka amin'ny sary tena tsara, atiny betsaka atolotra ary amin'ny ankapobeny ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra izay hita ao amin'ny Play Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Tonga any amin'ny toeram-pambolanao ny tantely amin'ny fanavaozana ny Hay Day vaovao
Lucas lionel dia hoy izy:
Satria manana mpifanila vodirindrina amiko aho izay tsy ampy 1 minitra 30 segondra efa vonona hijinja ny katsaka ary 5 minitra ny ahy?
Valiny tamin'i Lucas Lionel
Ahoana ny fomba fanaovana tranon-tantely? Nividy ny tantely sy ny milina tantely aho, nefa tsy hitako izay hametrahana ny tantely? Raha tsy haiko hoe aiza no hametrahana azy ireo? Mba ampio aho azafady
Tsy maintsy apetrakao amin'ny hazo misy anao ny tohotra